Wadan Gaajo ah oo Midawga Yurub ku biiray & Shacabka degan oo farxad iyo Dabaaldegyo bilaabay (Daawo Muuqaal ahaan) | warsugansomaliya.wordpress.com
Wadan Gaajo ah oo Midawga Yurub ku biiray & Shacabka degan oo farxad iyo Dabaaldegyo bilaabay (Daawo Muuqaal ahaan)
Dalkii 28-aad ayaa ku soo biiray Midawga Yurub waxaana dabaaldeg iyo farxad wali ku jira Shacabka dalkaan oo shaqo la´aan baahsan ay ku habsatay mudo dhoor sano ah .
Halkaan ka Daawo Croatia oo lagu soo daray Midawga Yurub & Shacabka dalkaan oo dabaaldegyo xoogan bilaabay
Wadanka Croatia ama Koraweeshiya qofba sida uu u yaqaan ayaa si toos ah ugu soo biiray wadamada loogu yeero Midawga Yurub wuxuuna dalkaan noqday wadankii 28-aad ee loo aqoonsaday in uu ka mid yahay The European Union (EU) .
Marka laga soo tago wadanka Slovenia , dalka Croatia waa wadankii labaad ee ka mid ahaan jiray Yogaslavia balse iminka ku soo biira Midawga wadamada Yurub. Shacabka dalka Croatia ayaa iminka u shaqo tagi kara wadamada dhaqaalaha leh ee Yurubta kale.
Dalalka gaajada ah ayaa inta badan marka ay ku biiraan Midawga Yurub The European Union (EU) waxaa laga caawiyaa dhanka dhaqaalaha iyo awooda waxeeyna shacabka dalalka lagu soo daray Midawga Yurub bilaabaan dabaaldegyo iyo farxad aanan la soo koobi karin .
← Nin Soomaali ah oo Lagu Eedeeyay in uu Kufsaday Gabar Yar oo Saqiir ah oo lagu xukumay Lix sano!!(Daawo Muuqaal+Warbixin)
Puntiland oo cadeysay in ciidamo ay ku taagerayaan Axmed Madoobe ay ku diyaarsanyihiin garoomada Maamulkaasi →